Ukuhlaziywa kwe-O'Day Mariner 19 I-Sailboat
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Iintlobo zeenqanawa
Kwiminyaka engaphezu kwe-40, i-mariner ye-19-foot foot-sailboat iye yindwendwe eyaziwayo. Ngokusekelwe kwinqanaba lokukhawuleza, elizinzile iRhodes 19, i-Mariner yongeza ikhabini elincinci nezinye izinto. Eyakhelwe ngu-O'Day ukususela ngo-1963 ukuya ngowe-1979, kwaye okwangoku ngu-Stuart Marine, uMariner wayethengiswa njengomgcini weentsapho. Njengenye yeyokuqala efikelelekayo, iinqwelo zokuhamba ngee-fiberglass, i-Mariner iye yaziwa kwiindawo zamachibi kunye neendawo ezikhuselweyo ukususela.
I-cockpit yayo enkulu, uzinzo olubanzi, kunye neendlela ezilula zokuhamba ngomkhumbi, uMariner unelungelo lokuzibiza kwaye usekho phakathi kweenqwelo zokuhamba ezihamba phambili eziphezulu.
Isikhephe esihle kakhulu sokufunda ukuhamba ngomkhumbi kunye nosapho olusondeleyo
Uzinzile kwaye uphatha kakuhle ukuba umoya okanye amaza akhawule
I-cockpit enkulu kakhulu inikeza ukhululekile ngomkhumbi we-4 ukuya ku-6
Eyomeleleyo kwaye eyakhiwe kakuhle; Iinqanawa ezindala ziye zahlala zihlala kakuhle
Ukuthambisa ngokuzenzekelayo nokulungileyo
I-Cabin iluncedo ekuhambeni kwemini kodwa iyancipha ukuba ilale ixesha elide
Izikebhe ezindala ziyakuthi zivule kwi-locker (xa ziphathwa kakubi ngabanikazi bangaphambili)
Imodeli yasekuqaleni yayingenanto yokuzibamba
Ubude bubanzi: 19 iinyawo ezi-2 intshi
I-Beam: 7 inyawo
Isalathwayo: i-keelboat: 3 inyawo-intshi ezintathu-i-centralboard up: i-intshi ezili-10
Ubunzima ubunzima: i-keelboat: 1435 lbs. - kwibhodi: 1305 lbs.
Indawo yomkhumbi (i-main and fractional jib): 185 sq ft
Ukuphakama kwesigxina (umgangatho ophezulu): iinyawo ezili-10
Ukugqithisa: i-keelboat: i-fixed-centerboard: ukukhaba
Injini ephakanyisiwe ngaphakathi: 2-6 HP
I-MSRP eyi-24,000 yezigidi ngokuxhomekeke kwizinto ezikhethiweyo-ezisetyenziswa ngokubanzi (I-NADA Marine Guide yexabiso lokuthengiswa kwee-1977 imizekelo: i-$ 2,110)
Izixhobo ezifumaneka lula kwiinqanawa ezindala, kunye nolwazi oluvela kubanikazi kunye nemibutho yeklasi
Ukuhlaziywa kweZikhokelo - Ukuhlaziywa kweMariner 19 I-Sailboat
Ngama-1950 iRhodes 19 yayingumkhosi ogqithisileyo wokuloba nokuhamba ngomkhumbi. Ngomnyaka we-1963 i-Olympic-medal-racer racer uGeorge O'Day wathenga idizayini, wakha kabusha i-topsides kunye nekhabini elincinci, waza waqala ukuvelisa enye yezinto zokuhamba ngeenqwelo zezilwanyana zokuqala ezifikelelekayo, i-Mariner 19. Ngethuba uvelisa i-keel version, Usuku lunikezelwa kwinqanaba lebhodi lokuphucula i-trailer ukuvula nokuvumela uMariner ukuba ahambe unxweme. I-Mariner ngokukhawuleza yaba yiklabhu eyaziwayo yodlaki-mhlaba kodwa kunye neenqanawa zentsapho ezintle zibonwa kakhulu kumachibi kunye neendawo. Ngowe-1979 i-O'Day yayikhiqize malunga nama-3800 aseMariners-inani elikhulu kunoma yimuphi umzekelo - kwaye emva ko-O'Day wayeka uMariner ukuba agxininise kwiinqanawa ezinkulu zokuhamba ngeenqanawa, i-Spindrift kwaye iStuart Marine yaqhubeka yokwakha uMlambi. I-Mariner isakhiwa-mhlawumbi umqhubi omude wokuqhubekeka wokuveliswa kwayo nayiphi na imodeli yomkhumbi.
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1960 kunye neye-1970, ukuguqulwa koyilo kwandise ukuthandwa koMariner kwintsapho. Imodeli yesi-2 + 2 yongeze i-cabin ephindwe kabini kwi-cabin, malunga ne-ezine, nangona i-cabin incinci kakhulu ukubiza le nqanawa i-cruiser. (Ukulala egodini kufana neenkampu zesikhwama.) Ubude bekhenpitti banda kwi-transom, okwenza isikhala esikhulu kunazo zonke iinqanawa ezibukhulu.
Imodeli yangoku iquka i-nonskid kwiiponti kunye nezihlalo ze-cockpit, zonke izalathisi zokulawula zikhokelela kwi-cockpit, i-flotation entle, kunye nokukhwela ukukhaba kwi- centralboard model evumela ukuba isikebhe sibe ngamanzi amaninzi. Ngomqolo wayo obanzi kunye ne-fractional jib eyanciphisa i-heeling, uMariner uzinzile kwaye ukhuselekile ukuhamba ngeemeko ezininzi.
Cishe bonke abanikazi be-Mariner bathi baya kuthenga kwakhona - abazisoli. Iimpawu eziqhelekileyo zikhankanywe ukuzinza kwayo ("akunakunceda"), i-cockpit yayo ephezulu (apho uchithe ixesha lakho ixesha elide), kwaye kulula kangakanani ukuqaliswa (nangona kwinqanaba elincinci lomkhumbi). Mhlawumbi ibaluleke kakhulu, uMariner uxolela kakhulu iimpazamo zomkhumbi-kwaye ke ngoko isikebhe esisiqalo sokuqala. Izikhalazo ezimbalwa zabanikazi be-Mariner bagxininise ngaphakathi ngaphakathi, apho uphahla lwekhabhi luphantsi kakhulu kubantu abade ukuba bahlale kwiistees ngaphandle kokugubha intloko.
Abanqabileyo abaManzi bafumaneka lula kwiimarike ezisetyenzisiweyo. Kukho amathuba okuba neengxaki nge-trailer endala (i-rust, ukugqoka kunye nokugqabhuka) kunokugqithisa umkhumbi we-fiberglass ngokwayo, ngaphandle kokuba kuqhutywe kakubi ngumnini wangaphambili. Umnini omtsha, uMbutho weCandelo leMariner unikezela ngeenzuzo ezininzi, kubandakanywa ulwazi lweenqanawa, amathiphu okuhamba ngomkhumbi, imithombo yeengxenye kunye neendaba.
Ukuba unomdla kwinqanawa elincinci kunye nekhabini elikhulu lokukhwela iifokethi, khangela iWest Potter 19 .
Ukuba ucinga ngeendlela zokuhamba ngomkhumbi njengombumbi we-Potter 19, khumbula ukuba enye yeenzuzo ezintle kukukwazi ukuyithatha kalula kwezinye iindawo zokuhamba ngomkhumbi, njengokuya kwi-Florida Keys ebusika.
Nantsi indlela engabizi, esebenzayo yokulawula i-tiller yakho ukuba uvumeleke ukuhamba isikhashana ngelixa uhamba ngomkhumbi.
Ngaba ufuna imoto entsha engaphandle kwinqanawa yakho encinci? Khangela i- propane-power powerboards from Lehr.
Ukuba unayo i-trailer yesinqanawa sakho, qiniseka ukuba uyigcina ngokwaneleyo kokubili ukuyigcina ukusebenza kwixesha elizayo kodwa ukuhlala ukhuselekile xa usebenzisa.
I-Sunfish: Ikhefu eligqibeleleyo okanye i-Urban Sailboat
Elvis Gyrates kwi-Ed Sullivan Show
Iincwadi ze-ESL ezinhlanu zabafundi abadala
Ubomi namaxesha kaDkt. Ronald E. McNair